Ukuhamba kwiHlabathi eliShushu
Thatha Ukuqapha Xa Uhamba Ngumoya Oshisayo
Ihlobo lithetha ukuba uzilungiselele ukuhamba kwindawo eshushu. Ukujongana nobushushu yinyaniso yobomi kwaye kungekhona nje kwiindlela eziyingozi.
Ubumanzi obuphezulu bungathumela isalathisi sokushisa (njani ukutshisa ukuhlanganiswa kobushushu bomoya kunye nomswakama ohambelana nomzimba wakho) ngaphezu kwee-degrees ezingama-100, nakwiindawo ezisenyakatho zelizwe.
Ngoko kungakhathaliseki ukuba uhlala phi, kubalulekile ukuba ugcine ingqalelo kwiimeko zemozulu ngaphambi kokuba uphume ngosuku lokuhamba kwehlobo.
Ngaphandle kokungahambi, akukho ndlela yokuphelisa ngokupheleleyo ingozi. Kodwa unokunciphisa kakhulu ingozi ngokuthatha amanyathelo okuqapha.
Nika ingqwalasela kwimimiselo yemozulu. IiSayithi ezifana ne-Weather.com zikuvumela ukuba ukhangele iziganeko ngendawo kunye nekhodi ye-ZIP. Isiza sinikeza izibikezelo zeqondo lokushisa ngeyure kwixesha langoku kunye neeyure ezintathu kwixesha elilandelayo.
Musa ukuziqhenya. Ushushu olusisiyo ixesha elifanelekileyo lokugqiba ukwenza oko-10-miler kunye neenyawo ezi-2,000 zokunyuka. Ukuba unenjongo yokuphuma, yenza umlinganiselo wokulindela okulindelekileyo uze ulondoloze iindlela ezinzima zenye imini.
Khetha ukunyuka okulungileyo. Ukuba uhlala kwindawo enokuhluka kwezobugcisa, khangela iindlela eziphezulu zokuphakama. Izinyuko ezisemaphandleni okanye ezinye izidumbu zamanzi, ezinjengeziLwandle eziMkhulu, ziya kuba zipholile kuneendlela eziphakathi komhlaba.
Vuka ekuseni. Amaqondo okushisa anokuba lula ngama-20-25 degrees ekuseni ekuseni Usuku luya kupholisa ukuya ekuphumeni kwelanga kodwa ukushisa kuya kusasa kunokuba kusasa.
Gwema ilanga elinzulu. Ilanga elichanekileyo liya kwandisa uxinzelelo olunxulumene nokushisa kunye nomngcipheko wokushisa ilanga. Zama ukufumana iindlela ezinobuncwane kwaye ugweme ukuhamba phakathi kwe-10 no-4.
Gcina ukhululekile kwaye ulula. Xa kuziwa kwimpahla yokugqoka, khumbula "I-Three's s:" Ukulula, ukulungelelanisa, ukukhanya okukhanyayo.
Gqoka isitya. Isikiti esilula, esiluhlaza kunye nobubanzi obanzi ukugcina ilanga ebusweni bakho nentamo yakho kukunceda uhlale upholile. Akukho nto ifanelekileyo: Uza kufuna isitya sokuthi uzimisele ukucwina ngamanzi ukusuka kumlambo okanye echibini. Kukho ezininzi iinqwelo zokuhamba eziqhelekileyo kwiimarike ezikunceda ukuvimba ii-ray ze-UV.
Sebenzisa (kunye nokupakisha) isikrini. Ukuboniswa, isikhumba selanga siza kwenza kube nzima ukuba umzimba wakho uhlale upholile.
Ngeentsuku ezitshisayo, umzimba wakho unokulahlekelwa ngamanzi amaninzi ngokuphefumula. Umgaqo oqhelekileyo kukuba ungazikhupha malunga nekota enye yamanzi-nangaphezulu xa uhamba ephakamileyo okanye ngokukhanya kwelanga. Ukunyuka kwiindawo eziphakamileyo kuya kukhawuleza ukulahlekelwa kwamanzi omzimba. Kwiindawo ezinomileyo, ungeke uqaphele ukuba unyakaza kangakanani ngenxa yezinga lokukhawuleza. Kwaye njengoko uphupha, uphinde ulahlekelwe yiminerali ebalulekileyo kwindlela yakho.
I-hydration efanelekileyo ibalulekile kwimpilo yezitho zomzimba, kubandakanya ingqondo. Ukunyanzeliswa kwamanzi kungakhokelela ekusebenzeni kwengqondo engaphumeleli, oko kubangela ukudideka nokugweba. Igazi liyakwazi ukunqanda, ukunyanzelisa intliziyo ukuba isebenze nzima.
Qalisa inkqubo ye-hydration ngaphambi kokuba uphume. Qalisa ukuhambisa iiyure ezimbalwa ngaphambi kokuba uqhube umzila.
Ukunyamekela umzimba wakho. Musa ukulinganisa amanzi. Ukuba unxaniwe, yisela. Xa uyingxenyeni yokunikezela kwamanzi, lixesha lokujika.
Phuza rhoqo. Esikhundleni sokuguqula ikhefu lamanzi onke kanye, thabatha iziphuzo ezincinci kunye nezihlandlo eziqhelekileyo zamanzi.
Hayi, ubhiya abubala. Utywala lunokukhawuleza ukudlulisa i-dehyration kuba luyidyovu. Ngako oko kuya kusela i-cafeine-enezixhobo zokusela zamandla.
Hlola umchamo wakho. Ukuba u-hydrated ngokufanelekileyo, kufuneka ukwazi ukuvelisa inani elikhulu lokukhanya okukhanyayo, umchamo ocacileyo. Ukuba umchamo ubonakala ubumnyama kwaye ugxininisekile, unokuthi unxweme.
Ewe, unako ukusela amanzi amaninzi. Imeko ebizwa ngokuthi hyponatremia inokuvela xa abagibeli bela amanzi amaninzi ngaphandle kokuzalisa i-electrolytes. Oko kungabangela ukuba igazi lamanqanaba e-sodium aqhubeke ngenxa yokuba ityuwa eninzi iphela iphelelwa ngumzimba. I-Hyponatremia yimeko enokuthi ingakhokelela ekuthinjeni.
Gcwalisa Nge-Electrolytes. Ukongeza kokubuyisela amanzi, kufuneka ugcine amanqanaba akho omzimba we-sodium, i-magnesium ne-potassium. Ukusalela kwesawoti kwisambatho sakho okanye ngaphakathi kwinqwelo yakho kuyimpawu yokulumkisa ye-hyponatremia. Ngoko xa uvuselela kwakhona, amanzi athile atya kunye nokusetyenziswa kwamanzi kunye ne-electrolytes, njengeziphuzo zezemidlalo.
Yidla ngokutyiwa ngetyuwa. Ityuwa ekutya kunokunceda ukubuyisela amanqanaba e-sodium kwigazi. Ngoko ukongeza kokusela amanzi amaninzi kwiintsuku ezishisayo, qiniseka ukuba udla ngokutya rhoqo ngeetyuwa, njengamantongomane, ama-pretzels kunye nomzila wokuhamba.
Ukuthintela Ukushisa Kwefuthe kunye neHroat Stroke
Iimeko ezifudumele ziyakwazi ukuphazamisa iindlela zokupholisa umzimba. Ukutshatyalaliswa komoya kubangelwa ukudibanisa kweqondo lokushisa lomzimba kunye nokuphelelwa kwamanzi. Ingakhokelela ekubethweni kokushisa, okuza kubangela ukufa.
Xa kwenzeka ukutshatyalaliswa kweshushu, kubalulekile ukuba unciphise ubushushu bomzimba wexhoba ngokuzifaka okanye ukugcina umntu omanzi ukwandisa ukupholisa okuphumayo. Ixhoba lifuna unyango lwebhedlele ngokukhawuleza kunokwenzeka kodwa akuvumelekanga ukuba lizame ukunyuka kwedwa.
Thatha ikhefu. Ulibale ngokubeka nayiphi na ibestests. Yeka ngokuphindaphindiweyo kunye nexesha elide kunokuba ungaphila ngosuku olupholileyo.
Khangela umthunzi. Phumani ilanga kangangoko unako, zombini kwikhefu kunye nomzila. Ngokukodwa xa ilanga linciphile esibhakabhakeni, iincenye zendlela leyo zingashukunyiswa yimithi okanye imithambeka.
Indlela yokufaka isithuba seBrawlinder yangaphambili